बाढीले झोलुङ्गे पुल भत्कायो, ५ मिनेटको बाटो अब ३ घण्टा पैदल:: Naya Nepal
सिमलताल (चितवन) : गत साउन ५ गतेको अविरल वर्षापछि आएको भीषण बाढीका कारण चितवन र तनहुँ जोड्ने झोलुङगे पुल त्रिशुली नदीले बगायो । नदीले पुल बगाएर क्षतिग्रस्त बनाएपछि त्रिशूली नदी पारिका स्थानीयलाइ हिजोआज दैनिक आवतजावतमा निकै कष्ट पर्न थालेको छ ।
तुइन हटाएर बल्ल बल्ल झोलेङ्गे पुल बनाएको भएपछि अब फेरि तुइनमै फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको सोमबहादुरले बताए । पुल नहुँदा तनहुँ जिल्लातिरका स्थानीय बढी समस्यामा परेको छन् । दैनिक आवतजावत, उपभोग्य वस्तुको किनमेल र गाउँको उत्पादन बेचविखन गर्नका लागि फेरि तुइनकै युगमा फर्किनुपरेको स्थानीयले बताए।
डा. केसीको नेपालगन्जमा उपचार
नेपालगन्ज : अनशन बसेको आठौं दिन डा. गोविन्द केसीको नेपालगन्जमा उपचार सुरु भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका डा. प्रवीण गिरी र सहयोगी हिमाल कार्कीसहित सोमबार दिउँसो ४ः३० बजेतिर हेलिकोप्टरमा नेपालगन्ज आएका डा. केसीको भेरी अस्पतालमा उपचार सुरु भएको हो।भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले अस्पताल आउनेबित्तिकै रगत र पिसाब जाँच गरेको बताए। उनको ईसीजी पनि गरिएको छ। ‘जुम्लामा हुँदा उपचार गर्न मान्नु भएको थिएन। नेपालगन्जमा पुगेपछि स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्न मान्नु भएको छ’, डा.गिरीले भने, ‘जुम्लामा हुँदा मुटुको चाल बढ्ने, पिसाब कम हुने समस्या थियो। भेरीमा स्लाइन पनि लिन मान्नुभयो।’ डा. केसीलाई मंगलबार काठमाडौं लैजाने तयारी गरिएको छ। भेरी अस्पताल बाहिर डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपालगन्जवासीले सोमबार साँझ द्वीप प्रज्ज्वलन गरेको थिए। ‘मेरो अनशन काठमाडौंमा पनि जारी रहनेछ। जुम्लामै बस्दा सरकारी पक्षबाट ठूलो क्षति हुने संकेत पाएँ।
सम्भावित हिंसा रोक्न काठमाडौं फर्किने निर्णय गर्यौं‍’, जुम्ला छाड्नुअघि डा. केसीले विमानस्थलमा भनेका थिए।